Madaxweynaha Kenya oo aqbalay dhambaal casumaadeedka ka qaybgalka caleemosaarka Farmaajo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Kenya oo aqbalay dhambaal casumaadeedka ka qaybgalka caleemosaarka Farmaajo
February 16, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Madaxweynaha Kenya oo gudaha madaxtooyada kula kulmay wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya kaasoo ku wareejiyay dhambaalkii uu ka siday madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. [Xigashada Sawirka: Radio Muqdisho]
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyata ayaa guddoomay dhambaal uga yimid madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo uu ku codsanayo in uu kas oo qaybgalo munaasabada caleemosaarkiisa, taasoo ka dhacaysa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho asbuuca soo aadan.
Sida uu ku waramay raadiyaha dowladda ee Radio Muqdisho dhambaalka ayaa waxaa gudbiyay wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye,kadib markii madaxweynaha Kenya uu qasriga madaxtooyada ee gudaha caasimada Nairobi ku qaabilay wasiirka maanta oo Khamiis ah.
Sida Radio Muqdisho uu kasoo xigtay Safaarada Soomaaliya ay ku leedahay gudaha dalka Kenya ,madaxweyne Uhuru ayaa aqbalay in uu ka soo qaybgalo munaasabada caleemo-saarka.
Gelinkii hore maanta oo Khamiis ah, Mr. Farmaajo ayaa si rasmiya u la wareegay xarunta madaxtooyada (Villa Soomaaliya).
March 29, 2018 Wasiiradda Arrimaha Dibada Soomaaliya iyo Kenya oo ka wadahadlay xiisada Beled Xaawo
Kenyan president accepts invitation to Farmajo’s inauguration
Somalia said Kenya is politicizing refugee camps, which have sheltered hundreds of thousands of Somali nationals for three decades, by moving to have them closed. Kenya upped pressure on the United Nations this week to come up with a [...]
Ankara-(Puntland Mirror) Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay shan sanno oo cusub ee madaxtinimada Turkiga. Sadi Guven, oo ah madaxa doorashooyinka ayaa sheegay in madaxweynuhu helay codadkii ugu badnaa ee loo baahnaa. Erdogan ayaa helay [...]